Chii Chinoitika Patinofa? Munhu Ane Kwaanoenda Here Kana Afa?
SARUDZA MUTAURO Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Altai Alur Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Ateso Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Boulou Bété Cambodian Cebuano Chavacano ChiChangana (Zimbabwe) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Douala Drehu Dusun Dutch Efik Emberá (Catío) Estonian Ewe Fante Fijian Finnish Fon French Futuna (East) Ga German Gitonga Gokana Greek Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guianese Creole Gun Guéré Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Lambya Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazahua Mbunda Mende Meru Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuIvory Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMyanmar Mutauro Wemasaini wokuNepal Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuThailand Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tatar Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Wichi Wolaita Yacouba Zande Zulu
1-3. Vanhu vanobvunza mibvunzo ipi nezverufu, uye zvimwe zvitendero zvinoipindura sei?
BHAIBHERI rinotivimbisa kuti “hapazovi nerufu.” (Zvakazarurwa 21:4) Muchitsauko 5, takadzidza kuti rudzikinuro runoita kuti tikwanise kuzorarama nekusingaperi. Asi vanhu vachiri kufa. (Muparidzi 9:5) Saka mumwe mubvunzo unokosha watinobvunza ndewekuti, Chii chinoitika kwatiri patinofa?
2 Mhinduro yemubvunzo iwoyo inokosha, kunyanya patinofirwa. Tinogona kuzvibvunza kuti: ‘Aenda kupi? Ari kutiona here? Anokwanisa kutibatsira here? Tichazombomuona here?’
3 Zvitendero zvinopindura mibvunzo iyi zvakasiyana-siyana. Vamwe vanodzidzisa kuti kana waiva munhu akanaka, unoenda kudenga uye kana waiva munhu akaipa unonopiswa mumoto. Vamwe vanoti paunofa unobva wava mudzimu uye unenge wava kurarama nemadzitateguru ako akafa kare. Uye vamwe vanoti paunofa unoenda kunotongwa wobva wazoberekwazve, kana kuti unodzoka kuupenyu wava nemumwe muviri, pamwe wava mumwe munhu kana kuti watova imwe mhuka.
4. Dzidziso dzezvitendero zvakawanda dzakafanana papi?
4 Zvitendero zvinoita sezvinodzidzisa zvakasiyana-siyana panyaya iyi. Asi dzidziso dzevakawanda vavo dzakafanana pachinhu chimwe chete. Zvinodzidzisa kuti munhu paanofa, pane chimwe chinhu chiri maari chinoramba chichirarama. Ichokwadi here ichocho?
5, 6. Chii chinoitika kwatiri patinofa?
5 Jehovha anoziva zvinoitika kwatiri patinofa, uye anotiudza kuti munhu paanofa, upenyu hwake hunoguma. Kufa zvinoreva kusava neupenyu. Saka kana munhu afa, pfungwa dzake nendangariro hazvirambi zvichirarama kune imwe nzvimbo. * Patinofa tinenge tisisakwanisi kuona, kunzwa, kana kufunga.
6 Bhaibheri rinoti “vakafa havana kana chavanoziva.” Vakafa havagoni kuda kana kuvenga munhu, uye muguva hamuna “basa rinoitwa kana kuronga zvekuita kana ruzivo kana uchenjeri.” (Verenga Muparidzi 9:5, 6, 10.) Uye pana Pisarema 146:4, Bhaibheri rinotiudza kuti kana munhu afa, “pfungwa dzake dzinoparara.”
ZVAKATAURWA NAJESU NEZVERUFU
Jehovha akasika vanhu kuti vararame nekusingaperi panyika
7. Jesu akatii nezverufu?
7 Pakafa shamwari yake Razaro, uyo aiva munhu akanaka, Jesu akati kuvadzidzi vake: “Razaro shamwari yedu arara.” Asi Jesu akanga asingarevi kuti Razaro aizorora hake. Jesu akazoti: “Razaro afa.” (Johani 11:11-14) Saka Jesu akafananidza rufu nekurara. Haana kuti Razaro aiva kudenga kana kuti aiva nedzimwe hama dzake dzakafa. Uye haana kuti Razaro akanga ari kune imwe nzvimbo achipiswa nemoto kana kuti akanga achiberekwazve semumwe munhu kana kuti mhuka. Razaro akanga akafanana nemunhu akafa nehope. Mamwe magwaro anofananidza rufu nekurara. Bhaibheri rinotaura kuti Stefani paakaurayiwa, “akabva arara murufu.” (Mabasa 7:60) Muapostora Pauro akanyorawo nezvevamwe vaKristu vakanga “vakarara murufu.”—1 VaKorinde 15:6.
8. Tinoziva sei kuti Mwari haana kusika vanhu kuti vafe?
8 Mwari akasika Adhamu naEvha achida kuti vazofa here? Aiwa! Jehovha akavasika kuti vanakidzwe neupenyu husingaperi vaine utano hwakakwana. Jehovha paakasika vanhu, akavapa chido chekurarama nekusingaperi. (Muparidzi 3:11) Vabereki havadi kuona vana vavo vachichembera uye vachifa, uye Jehovha haadiwo kuona izvozvo zvichiitika kwatiri. Saka kana Mwari akatisika kuti tirarame nekusingaperi, nei tichifa?
9. Nei murayiro wakapiwa Adhamu naEvha wakanga usina kuoma?
9 Mumunda weEdheni, Jehovha akaudza Adhamu kuti: “Unogona hako kudya michero yemiti yese yemumunda kusvikira waguta. Asi haufaniri kudya muchero wemuti wekuziva zvakanaka nezvakaipa, nekuti zuva raunoudya chokwadi uchafa.” (Genesisi 2:9, 16, 17) Murayiro iwoyo wakajeka wakanga usina kuoma kuteerera, uye Jehovha aiva nekodzero yekuudza Adhamu naEvha kuti ichi chakanaka uye ichi chakaipa. Kuteerera kwavo Jehovha kwaizoratidza kuti vaimuremekedza. Kwaizoratidzawo kuti vaitenda zvese zvaakanga avaitira.
10, 11. (a) Satani akanyengera sei Adhamu naEvha? (b) Nei zvisingaiti kuti zvinzi Adhamu naEvha vakatadza nekusaziva?
10 Zvinorwadza kuti Adhamu naEvha vakasarudza kusateerera Jehovha. Satani akati kuna Evha: “Ichokwadi here kuti Mwari akati hamufaniri kudya michero yemiti yese yemumunda?” Evha akapindura kuti: “Tingadya hedu michero yemiti yemumunda. Asi Mwari akataura nezvemuchero wemuti uri pakati pemunda, achiti: ‘Musaudya, kana kuubata; mukangodaro muchafa.’”—Genesisi 3:1-3.
11 Satani akabva ati: “Chokwadi hamumbofi. Nekuti Mwari anoziva kuti zuva ramuchaudya, maziso enyu achasvinudzwa uye muchafanana naMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa.” (Genesisi 3:4-6) Satani aida kuti Evha afunge kuti aikwanisa kuzvisarudzira kuti ichi chakanaka uye ichi chakaipa. Akanyepawo pamusoro pezvaizoitika kana Evha akasateerera. Satani akati Evha akanga asingazofi, saka Evha akadya muchero wacho akazopawo murume wake. Adhamu naEvha vaiziva kuti Jehovha akanga avaudza kuti vasadya muchero wacho. Pavakaudya, vakasarudza kusateerera murayiro wakajeka uye usina kuoma. Kudya kwavakaita kwakaratidza kuti vakanga vasingaremekedzi Baba vavo vekudenga vane rudo. Vakanga vasingagoni kutaura kuti vatadza nekusaziva!
12. Nei kusateerera Jehovha kwakaita Adhamu naEvha kuchirwadza?
12 Zvinorwadza kuti vabereki vedu vekutanga vakanga vasingaremekedzi Musiki wavo zvakadaro! Ngatitii une vana vako vawakashanda nesimba uchivarera. Unganzwa sei kana vakakupandukira vachiita zvinopesana nezvawakavaudza? Haurwadziwe nazvo here?
Adhamu akabva kuguruva, uye akadzokera kuguruva
13. Jehovha airevei paakati “uchadzokera kuguruva”?
13 Pavasina kuteerera, Adhamu naEvha vakarasikirwa nemukana wekurarama nekusingaperi. Jehovha akanga audza Adhamu kuti: “Zvauri guruva uchadzokera kuguruva.” (Verenga Genesisi 3:19.) Izvi zvaireva kuti Adhamu aizova guruva zvakare, sekunge akanga asina kumbobvira asikwa. (Genesisi 2:7) Adhamu paakatadza, akafa uye akanga asisipo.
14 Dai Adhamu naEvha vakateerera Mwari, vangadai vachiri vapenyu nanhasi. Asi pavasina kuteerera, vakaita chivi, saka vakazofa. Chivi chakafanana nechirwere chakaipisisa chatakawana kubva kuvabereki vedu vekutanga. Tese tinoberekwa tiri vatadzi, ndokusaka tichifa. (VaRoma 5:12) Asi handizvo zvakasikirwa vanhu naMwari. Mwari akanga asingadi kuti vanhu vafe, uye Bhaibheri rinoti rufu “muvengi.”—1 VaKorinde 15:26.
15. Chokwadi nezvevakafa chinotisunungura sei?
15 Chokwadi pamusoro pevakafa chinotisunungura panhema dzakawanda dzinotaurwa. Bhaibheri rinotidzidzisa kuti vakafa havarwadziwe kana kusuwa. Hatikwanisi kutaura navo, uye ivo havakwanisi kutaura nesu. Hatikwanisi kubatsira vakafa, uye ivo havakwanisi kutibatsira. Hapana chavanokwanisa kutiita, saka hatina chikonzero chekuvatya. Asi zvitendero zvakawanda zvinotiudza kuti vakafa vanenge vari vapenyu kune imwe nzvimbo uye kuti tinokwanisa kuvabatsira kana tikabhadhara vafundisi kana kuti vaya vanoonekwa sevanhu vatsvene. Asi kana tichiziva chokwadi nezvevakafa, hatinyengerwi nenhema idzodzo.
16. Zvitendero zvakawanda zvinodzidzisa nhema dzekutii nezvevakafa?
16 Satani anoshandisa dzidziso dzenhema kuti tifunge kuti vakafa vachiri vapenyu. Zvimwe zvitendero zvinodzidzisa kuti patinofa, pane chimwe chinhu chiri matiri chinoramba chichirarama kune imwe nzvimbo. Chitendero chako chinokudzidzisa izvozvo here, kana kuti chinokudzidzisa zvinotaurwa neBhaibheri nezvevakafa? Satani anoshandisa nhema kuti abviswe vanhu pana Jehovha.
17. Nei dzidziso yekuti vanhu vachanotsva ichisvibisa zita raJehovha?
17 Zvinodzidziswa nezvitendero zvakawanda zvinotyisa. Zvimwe zvitendero zvinodzidzisa kuti vakaipa vachanopiswa nekusingaperi. Nhema idzodzo dzinosvibisa zita raJehovha. Haangambobvumiri kuti vanhu vatambure zvakadaro! (Verenga 1 Johani 4:8.) Unonzwa sei nezvemumwe munhu anoranga mwana wake nekuisa zvigunwe zvake mumoto? Unototi munhu iyeye ane utsinye husingaiti. Haungambodi kuzivana nemunhu akadaro. Satani anoda kuti tinzwe saizvozvo nezvaJehovha!
18. Nei tisingafaniri kutya vakafa?
18 Zvimwe zvitendero zvinodzidzisa kuti vanhu pavanofa vanova midzimu. Zvitendero zvakadaro zvinodzidzisa kuti tinofanira kuremekedza kana kuti kutotya midzimu iyoyo nekuti inenge yava shamwari dzedu dzine simba kana kuti vavengi vedu vanotyisa. Vanhu vakawanda vanobvuma nhema idzodzo. Vanotya vakafa, saka vanovanamata panzvimbo paJehovha. Yeuka kuti vakafa havana chavanokwanisa kunzwa kana kufunga, saka hatifaniri kuvatya. Jehovha ndiye Musiki wedu. Ndiye Mwari wechokwadi, saka tinofanira kunamata iye chete.—Zvakazarurwa 4:11.
19. Kuziva chokwadi nezvevakafa kunotibatsira sei?
19 Patinoziva chokwadi nezvevakafa, tinosunungurwa panhema dzezvitendero. Uye chokwadi ichi chinotibatsira kunzwisisa zvinhu zvinoshamisa zvatakavimbiswa naJehovha nezveupenyu hwedu neramangwana redu.
20. Tichadzidzei muchitsauko chinotevera?
20 Kare kare, mumwe mushumiri waMwari ainzi Jobho akambobvunza kuti: “Kana munhu akafa, angararamazve here?” (Jobho 14:14) Zvinoita here kuti munhu akafa araramezve? Mhinduro yatinopiwa naMwari muBhaibheri inofadza chaizvo. Tichainzwa muchitsauko chinotevera.
^ ndima 5 Vamwe vanofunga kuti mweya kana kuti mudzimu wemunhu unoramba uchirarama kana afa. Mamwe Mashoko 16 anotaura zvakawanda nezvenyaya iyi.
DZIDZISO 1: MUNHU PAANOFA, UPENYU HWAKE HUNOGUMA
“Vakafa havana kana chavanoziva.”—Muparidzi 9:5
Pisarema 146:3, 4; Muparidzi 9:6, 10
Patinofa hatikwanisi kuona, kunzwa, uye kufunga.
Jesu akafananidza rufu nekurara.
DZIDZISO 2: JEHOVHA AKANGA ASINGADI KUTI VANHU VAFE
“Haufaniri kudya muchero wemuti wekuziva zvakanaka nezvakaipa, nekuti zuva raunoudya chokwadi uchafa.”—Genesisi 2:17
Satani akanyepa pamusoro pezvaizoitika kana Evha akasateerera murayiro waMwari. Adhamu naEvha pavasina kuteerera Jehovha, vakatadza uye vakazofa.
Adhamu paakafa, akanga asisipo.
Chivi chakafanana nechirwere chakaipisisa chatakawana kubva kuvabereki vedu vekutanga. Tese tinoberekwa tiine chivi, ndosaka tichifa.
Bhaibheri rinoti rufu muvengi.
DZIDZISO 3: CHOKWADI NEZVEVAKAFA CHINOTISUNUNGURA
“Kana munhu akafa, angararamazve here? Ndichamirira . . . kusvikira ndasunungurwa.”—Jobho 14:14
Kuziva chokwadi nezvevakafa kunotisunungura sei panhema dzinotaurwa nevanhu?
Dzidziso yekuti vanhu vachanopiswa inosvibisa zita raJehovha. Haangambobvumiri kuti vanhu vatambure zvakadaro.
Vakawanda vanotya vakafa saka vanovanamata panzvimbo paJehovha. Jehovha ndiye Mwari wechokwadi, saka tinofanira kunamata iye chete.